होसियार ! सबैभन्दा धेरै रेडियसन निकाल्ने स्मार्टफोन - InHeadline
By Anu Rana on Feb 12,2019 - 16:44
हामीमध्ये धेरैले मोबाइल फोन खरीद गरिरहेको हुन्छौँ जसले जहाँ हामी क्यामराको क्षमता, ब्याट्री तथा अन्य फिचरहरुमा मात्र ध्यान दिन्छौँ । तर उक्त मोबाइल फोनको जानकारी पुस्तिकामा सानो अक्षरमा लेखिएको यसको रेडियसन लेभल अर्थात् विकिरणको तहको बारेमा पढ्ने बानी हामीमा छैन । तर हामीले चौबिसै घण्टा आफ्नो साथमा राखिने स्मार्टफोनहरुले कतै हानिकारक विकिरण उत्पन्न गरेर हाम्रो स्वास्थ्यलाई नै असर पारिरहेका त छैनन् ?
कुन स्मार्टफोनले कति विकिरण उत्पन्न गर्दछ भन्ने कुराको मापन स्पेसिफिक एब्जप्र्सन रेट अर्थात् एसएआरबाट गरिन्छ । हुनत सबै मोबाइल फोनहरु रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रसार गर्ने साधन हुन् । तर यी साधनले कति तहसम्म हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक विकिरण उत्सर्जन गर्दछन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यसको एसएआर भ्यालू थाहा पाउनु जरुरी पर्दछ ।
विज्ञहरुले भनेका छन कि मोबाइल फोनको अधिकतम विकिरणको तह अर्थात् एसएआर भ्यालू १.६ वाट प्रति केजी भन्दा बढि हुनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुनेछ । अर्थात् मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहँदा सरीरको प्रति किलो तन्तुले मोबाइलबाट त्यसबाट निस्किने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम १.६ वाट भन्दा बढि उर्जा प्राप्त गर्यो भने त्यो हानिकारक हुन्छ ।
जर्मनीको विकिरण सुरक्षा संघीय कार्यालयले नियमित रुपमा मोबाइल फोनले उत्पन्न गर्ने विकिरणको सूचि सार्वजनिक गर्दछ । कार्यालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचि अनुसार चिनिया स्मार्टफोन कम्पनी शाओमीको एम आइ ए १ सबैभन्दा धेरै विकिरण उत्सर्जन गर्ने स्मार्टफोनको रुपमा रहेको पाइएको छ । उक्त स्मार्टफोनको एस ए आर १.७५ रहेको छ ।
उल्लेखित सूचि अनुसार सबैभन्दा धेरै रेडियसन उत्पन्न गर्ने १६ वटा स्मार्टफोन मध्ये ८ वटा त चिनिया स्मार्टफोन ब्राण्ड शाओमी र वन प्ल्सका रहेका रहेका छन् । त्यस्तै पि्रमियम स्मार्टफोन मध्ये एप्पलका दुईवटा मोडेल, आइफोन सेभेन र एट पनि बढि विकिरण उत्पन्न गर्ने सूचिमा परेका छन् ।
सबैभन्दा कम रेडियसन उत्सर्जन गर्ने स्मार्टफोन
सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ एस ए आर ०.३२
ट्याग - रेडियसन , स्मार्टफोन